अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासको सेवा सुचारू
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासको सेवा आजबाट सुचारु भएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारीपछि भएको लकडाउनका कारण रोकिएको राजदूतावासको कन्सूलर सेवा आजबाट सञ्चालनमा आएको हो । विस्तृतमा
अष्ट्रेलियामा कोरोना कारण एकैदिन २१ जनाको मृत्यु
अष्ट्रेलियामा कोरोना कारण हालसम्म कति जनाले ज्यान गुमाए ?
अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण एकैदिन ११ जनाको मृत्यु
नेपाल आईडल मेलबर्न कन्सर्टको तयारी सकियो
सिड्नी । यही फेब्रुअरी ३ तारिखमा आयोजना हुने नेपाल आईडल मेल्बर्न कन्सर्टको तयारी सकिएको छ । आयोजक संस्था स्मार्ट एक्सेस इन्टरटेन्टमेन्टका प्रमुख बिभुषण जोशीले बताएका छन् । कन्सर्टका लागि कलाकारको समूह फेब्रुअरी २ मा मेलबर्न पुग्नेछन् ।
अष्ट्रेलिया विशेषः नर्थन टेरिटोरीमा जाँदा पीआर पाउन सजिलो हुन्छ ?
पछिल्लो केही दिनयता धेरै साथीहरूले नर्थर्न टेरिटोरी सरकारको डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रिमेन्ट (डामा) को बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ । यो लेखमार्फत तिनै जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियाका नेपाली समुदायलाई थाहै नदिइ सपरिवार नेपाल फर्किइन् लक्की शेर्पा
सिड्नी । आफ्नै सवारी चालकले मानवतस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि विवादमा मुछिएकी शेर्पालाई बुधवार सपरिवार नेपाल फर्किएकी छन् ।
अष्ट्रेलियाका एक विशेष व्यक्ति !
अष्ट्रेलियामा बस्दै आइरहेका जेम्स हेरिसन ६० वर्षदेखि रक्तदान गर्दै आइरहेका छन् । उनले २४ लाख बच्चाहरुको ज्यान जोगाएका छन् । यसै कारण उनलाई ‘गोल्डेन आर्म’ अर्थात् भगवान् पनि भन्ने गरिन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार ८१ वर्षिय यी वृद्धको रगतमा एक विशेष खालको गुण रहेको छ जुन आम मानिसमा हुँदैन ।
एनआरएन नागरिकता ऐन संशोधनसम्वन्धी प्रस्ताव संसदीय समितिमा सर्वसम्मतिले पारित
समितिको सोमबार बसेको बैठकले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) ले उठाएका केही चासो र गुनासोसमेतको सम्बोधन गर्दै सो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
अष्ट्रेलियामा एक ३१ वर्षिय ज्योतिषी पक्राउ
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा ज्योतिषी अर्जुन मुनियप्पाले एक जना किशोरीमाथि यौन हमला गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ ।
पौडी खेल्ने क्रममा अष्ट्रेलियामा अर्का एक नेपाली युवाको मृत्यु
सिड्नीः पौडी खेल्ने क्रममा हराएका एक जना युवकको लास फेला परेको छ । बिहान ११ः३० मा आपतकालिन सर्भिसका लागि हार गुहार गरिएको थियो ।
ब्रिसवेनका गायक दिपकराज पाण्डेको स्वारमा “थोरै माया म दिउला” गीतको भिडियो सार्वजनिक
ब्रिसवेन । अस्ट्रेलियाको ब्रिसवेनका गायक दिपक राज पाण्डे र मेलिना राईको स्वर मा “थोरै माया म दिउला” बोलको गितको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
नवीन प्यासीलाई साताको साहित्य पुरस्कार
सिड्नी । यस बर्षको साताको साहित्य पुरस्कार कवि नवीन प्यासीको कविता आशीर्वाद प्रदान गरिने कुरा साताको साहित्यडटकमले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्बजनिक गरेको छ ।
अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
अष्ट्रेलिया भन्ने बित्तिकै बिद्यार्थीहरु मात्र नभएर अभिभावकहरु पनि धेरै उत्साहित देखिन्छन् र यो स्वभाविक पनि होला । तर अष्ट्रेलिया आएपछि के काम गर्ने, कसरी काम गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने र कुन कुन क्षेत्रमा काम पाईन्छ र आफु त्यो काम गर्न योग्य छु वा छैन भनेर सामान्य जानकारी र ज्ञान लिएर आउन अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ ।